အဆိုပါချောင်းကိုအပေါ် ERD COMMANDER ကိုမီးရှို့ဖို့ကိုဘယ်လို - USB FLASH DRIVE ကို - 2019
ERD Commander နှင့်အတူကဒ်ပြားဖန်တီးတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
ERD Commander (ERDC) ကျယ်ပြန့်သည် Windows စွမ်းဆောင်ရည်၏ပွနျလညျထူထောငျအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ operating system ကို Windows မှာ PE ကို၎င်း, operating system ကို performance ကို restore လုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်ကြောင်းဆော့ဖ်ဝဲအထူးအစုနဲ့ Boot တက် disk ကိုပါဝင်ပါသည်။ သင် flash drive ကိုအပေါ်တစ်ဦးထားရှိသည်ဆိုပါကအလွန်ကောင်းသော။ ဒါဟာအဆင်ပြေပြေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါချောင်းကိုအပေါ် ERD Commander ကိုမီးရှို့ဖို့ကိုဘယ်လို
သင်သည်တတ်နိုင် ERD Commander, အတူ bootable flash drive ကိုပြင်ဆင်ပါ:
က ISO-image ကိုမှတဆင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း,
အဲဒီ ISO-image ကိုမသုံးဘဲ;
Windows အ tools တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
Method ကို 1: က ISO-image ကိုအသုံးပြုခြင်း
အစပိုင်းမှာ ERD Commander များအတွက်က ISO-image ကို download လုပ်ပါ။ ဒါဟာအရင်းအမြစ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
တစ်ဦး bootable flash drive ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကျယ်ပြန့်သောအထူးအစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ သူတို့တစ်ဦးစီဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ။
ပရိုဂရမ်ကို Install လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာက run လိုက်ပါ။
ဖွင့်ဝင်းဒိုးရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာလယ်ပြင်၌ "စက်ပစ္စည်း" သင်၏ USB flash drive ကို Select လုပ်ပါ။
အောက်တွင်တစ်တန်းတစ်ကို tick ထား "တစ်ဦးက boot disk ကို Create"။ ၏ညာဘက် "က ISO-image ကို" သင့်ရဲ့ဆွဲယူတဲ့က ISO image ကိုမှလမ်းကြောင်းရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် disc ကိုအတူ drive ကို icon ကို click လုပ်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့လက်ျာဘက်လမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်စံဖိုင်ရွေးချယ်ရေးင်းဒိုးဖွင့်လှစ်။
ဘယ်အချိန်မှာ pop-up ကလစ် "အိုကေ".
မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်, flash drive ကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, သင် program ကို UltraISO ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤသည်သင်တစ်ဦး bootable USB drive ကဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်သောလူကြိုက်အများဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
ယင်း utility ကို UltraISO Install လုပ်ပါ။ ထို့နောက်ယင်းက ISO-image ကိုဖန်တီးပေးသည့်အဘယ်အရာကိုအောက်ပါပါဘူး:
အဆိုပါ tab ကိုအပေါ် main menu ကိုသွားပါ "Tools";
ကို item ကို select "CD / DVD ကို၏ပုံရိပ်တစ်ခု Create";
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, CD / DVD ကို drive ကိုစာတစ်စောင်ကို select နှင့်လယ်ပြင်ရိုက်ထည့်ပါ "Save As ကို" အဲဒီ ISO image ကိုရန်အမည်နှင့်လမ်းကြောင်း;
သငျသညျပုံပေါ် image ကိုဖွင့်ရန်အဆိုပြုလွှာနှင့်အတူပြတင်းပေါက်ဖန်တီးပြီးနောက်။ စာနယ်ဇင်းများ "အမှတ်".
ဒီလိုလုပ်ဖို့, တစ်ဦးကို USB flash drive ကိုအပေါ်ရရှိလာတဲ့ image ကိုအသံဖမ်း:
tab ကိုသွားပါ "Bootstrap";
ကို item ကို select "Disk ကို Image ကိုရေးပါ";
အသစ်က window ၏ parameters တွေကိုစစ်ဆေးပါ။
လယ်ပြင်၌ "Disk ကို Drive ကို" သင်၏ USB flash drive ကိုရွေးပါ။ လယ်ပြင်၌ "Image ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း" အဲဒီ ISO ဖိုင်ကိုလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်မည်။
သောလယ်သို့ဝင်ပြီးနောက် "ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နည်းလမ်း" အဓိပ်ပါယျ "ကို USB HDD"စာနယ်ဇင်းများ "Format ကို" နှင့်ကို USB-drive ကို format လုပ်ပါ။
ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Burn"။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်သင်သည်ခလုတ်ကို reply ရာမှတစ်ဦးသတိပေး, ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ် "Yes" ကို.
တစ်ဦး bootable USB drive ကဖန်တီးပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ။
သင်ခန်းစာ: Windows ကိုအပေါ်တစ်ဦး bootable USB drive ကို Creating
Method ကို 2: က ISO-image ကို အသုံးပြု. မရှိရင်
ERD Commander နှင့်အတူတစ်ဦးက USB flash drive ကို Create ဖြစ်နှင့်တစ်ဦး image file ကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲနိုင်ပါတယ်။ ဤရည်ရွယ်ချက် PeToUSB အစီအစဉ်အတွက်။ အသုံးပြုရန်စေရန်, ဤအမှုကို:
program ကို run လိုက်ပါ။ ဒါဟာ MBR နှင့် partition ကို Boot တက်ကဏ္ဍနှင့်အတူကို USB-drive ကို format နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင့်ဖြုတ်သိုလှောင်မှုမီဒီယာသင့်လျော်သောလယ်ပြင်၌ရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါအချက်များအပေါ်တစ်ဦးအမှတ်အသားထားပါ "ကို USB ဖြုတ်" နှင့် "Disk ကို Format ကို Enable"။ ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Start".
အဆိုပါချောင်းကိုအပေါ် (အဆွဲယူတဲ့က ISO-image ကိုဖွင့်လှစ်) တစ်ခုလုံးကိုဒေတာ ERD Commander ကူးယူပါ။
ဖိုလ်ဒါကိုကော်ပီကူး "I386" အမြစ် directory ထဲတွင်ဒေတာဖိုင်များကို "Biosinfo.inf", "Ntdetect.com" နှင့်အခြားသူများ။
ဖိုင်အမည်ကိုပြောင်းလဲပါ "Setupldr.bin" အပေါ် "NTLDR".
directory ကိုအမည်ပြောင်း "I386" တွင် "Minint".
Done! ERD Commander တစ် flash drive ကိုအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Hyde စိစစ်အတည်ပြုစွမ်းဆောင်မှုကို flash drives တွေကို
Method ကို 3: Windows ကိုအဆိုပါစံနည်းလမ်းများ
မီနူးကိုသုံးပြီး command line ကိုအတွက် Log "Run ကို" (တစ်ပြိုင်နက်ခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်အစပျိုး "ဟုဦးဝင်း" နှင့် "R ကို") ။ အထဲတွင်, type ကို cmd နှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
အမိန့်ကိုရိုက်ထည့်diskpartနှင့်စာနယ်ဇင်း "Enter" ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။ သင်ကစကားနှင့်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်: "diskpart>".
disk တွေစာရင်းကိုရယူရန်, command ကိုရိုက်ထည့်ပါစာရင်း disk ကို.
သင်၏ USB drive ကို၏တပ်မက်လိုချင်သောအအရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာကော်လံအတွက်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ် "Size ကို"။ အမိန့်ကိုရိုက်ထည့်disk ကို 1 ကို selectအဘယ်မှာ 1 - စာရင်းကိုပြသသောအခါအလိုရှိသော drive ကို၏နံပါတ်။
အဖွဲ့သန့်ရှင်းသောသင့်ရဲ့ flash drive ကိုရဲ့ contents ရှင်းလင်းပါ။
အသစ်တစ်ခုကို flash drive ကို Create စာရိုက်အသုံးပြုပုံမူလတန်း partition ကိုဖြစ်ပါတယ်partition ကိုမူလတန်းဖန်တီး.
ယင်း၏နောက်ဆက်တွဲစစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဖို့ကို Select လုပ်ပါpartition ကို 1 ကို select.
အဆိုပါ FAT32 ဖိုင်စနစ်ရွေးချယ်ထား partition ကို format (က ERD Commander နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဒီလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်) အဖွဲ့သည်format နဲ့ fs = fat32.
မီနူး "Disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု" (ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်သော့ခတ်မ "Diskmgmt.msc" ပြတင်းပေါက်၌) command များကို execute control panel ကို တုတ်၏အက္ခရာဆုံးဖြတ်ရန်။
တစ်ဦး Boot တက်ကဏ္ဍအမျိုးအစား Create "Bootmgr"အဆိုပါ command ကို runbootsect / nt60 က F:အဘယ်မှာရှိက F - ကို USB-drive ကို၏စာ။
အမိန့်ကိုအောင်မြင်စွာကွပ်မျက်ခံရသည်ဆိုပါကသတင်းစကားတစ်ခုပေါ်လာသည် "Bootcode အောင်မြင်စွာအားလုံးပစ်မှတ်ထား volumes ကိုအပေါ် updated ခဲ့သည်".
USB flash drive တစ်ခုအပေါ် ERD Commander ပုံရိပ်ရဲ့ contents ကူးယူပါ။ Done!
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အဆိုပါ flash ကို format တစ်ခု tool အဖြစ်က command line
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, စံချိန် ERD Commander ကပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ အရေးကြီးတာက, ဖြောင့်စေမယ့်တုတ်သုံးစွဲဖို့မမေ့မလြော့ပါ BIOS ကို setting များကို။ ကောင်းသောအမှု,
ဗီဒီယို Watch: ERD Commander for Windows7ERD65 (အောက်တိုဘာလ 2019).